4. Floristum.ru ဆိုတာဘာလဲ။
၁၅။ ပေးပို့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မည်သို့အကြောင်းကြားမည်နည်း။
၂၀။ ပန်းအလှကုန်များကိုဖုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်မဆက်သွယ်နိုင်ပါ။ ဘာလုပ်မလဲ?
၃၀။ Super Offer အပိုင်းတွင်မည်သည့်အရာကိုရှာရမည်နည်း။
37. ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှငွေပေးချေမှုကိုလုံခြုံပါသလား။
ပထမ ဦး စွာ၊ သင်ပို့သည့်မြို့ကိုဖော်ပြပြီး၎င်းတွင်ရှိသောခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်ကြိုက်သည့်ပန်းစည်းကိုရွေးချယ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာသို့သွားပါ။ ဤတွင်သင်သည်လက်ခံသူ၏အချက်အလက်၊ ပေးပို့သည့်အချိန်နှင့်ပန်းစည်းပေးပို့သူ၏အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်။ ငွေပေးချေမှုအပြီးတွင်အော်ဒါသည်ပန်းအလှများသို့သွားသည်။ သင်၏ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အီးမေးလ်သို့ပေးပို့သည့်စာဖြင့်ပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုသင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်တွင်လည်း floristum.ru ၌ရနိုင်သည်။
သင်၏အီးမေးလ်၊ အီးမေးလ်များဖြင့်သင်၏မှာကြားမှုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိသင်၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ရှိအမှာစာအခြေအနေကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ သင်ငွေပေးချေမှုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်သင်၏ပန်းစည်းကိုကောက်ယူသည့်ပန်းအလှပြင်သူ၏အဆက်အသွယ်များအတွက် SMS နှင့်အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုသင်ရရှိမည်။ ပန်းချီဆရာကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း၊ အခြေအနေကိုရှင်းလင်းရန်သို့မဟုတ်ပန်းချီများ၏သတ်မှတ်ချက်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
လူတစ် ဦး ချင်းအတွက်ဘဏ်ကဒ်ပြားကို အသုံးပြု၍ သင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ တရားဝင်ငွေပေးချေသူများအတွက်ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်။
Floristum.ru သည်အဆင်ပြေလွယ်ကူသည့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားရှိပန်းများဆိုင်များနှင့်ပန်းအလှပြင်သူများသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချရန်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်သင်သည်သင်၏မြို့တော်မှပန်းအလှပြင်သူတစ် ဦး ထံမှပန်းစည်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးမှာယူနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သင်၏ဆန္ဒများကိုအပြည့်အ ၀ ဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်စစ်မှန်သောဖောက်သည်များကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို site ပေါ်တွင်တင်ခြင်း၊ ပန်းပွင့်ပို့ခြင်းအတွက်မှာယူမည့်နေရာရွေးချယ်ရာတွင်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ Floristum.ru သည်သင်အမှာစာကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုအာမခံသည်။ ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအခြေအနေများတွင် ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်၏ငွေကိုပြန်ပေးလိမ့်မည်။ အပိုဆုငွေနှင့်အရောင်းဆိုင်များသည်အမှာစာပြီးဆုံးပြီးသုံးရက်အကြာတွင်ပန်းရောင်းသူများအတွက်ငွေလက်ခံရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ကျော
သင်၏ဘဏ်ကတ်အသေးစိတ်ကိုမှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းပြီးကြောင်းနှင့်နာမည်နှင့်နာမည်ကိုကဒ်ပေါ်ရှိအင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ CVV ကုဒ်သည်ကဒ်၏နောက်ဖက်တွင်ရှိသောဂဏန်း ၃ လုံးဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်စနစ်သည်ငွေပေးချေမှုကိုအပြီးသတ်မပြီးစီးနိုင်ကြောင်းသင့်အားရှင်းပြပါလိမ့်မည်။ ငွေပေးချေမှုကိုသင်၏ဘဏ်မှပယ်ချခဲ့ပါကသင့်ကဒ်မှအခွန်အကောက်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို သုံး၍ အထောက်အကူပြုဝန်ဆောင်မှုကိုသေချာစွာဆက်သွယ်ပါ။ သင့်မှာယူမှုအတွက်ကွဲပြားသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။
ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ဖောက်သည်တွေအတွက်လုံခြုံမှုကိုအာမခံတယ်။ ငွေပေးချေမှုကိုသီးခြားလုံခြုံသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပြုလုပ်ပြီးငွေပေးချေပြီးနောက်ကဒ်ဒေတာကိုစနစ်အတွင်းသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မျှော်လင့်ချက်နှင့်ကျော်ကြားသောငွေပေးချေမှုစနစ် CloudPayments နှင့်ပူးပေါင်းသည်။
ဒီနေ့မဖြစ်နိုင်ဘူး မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်ပန်းများပို့ခြင်းအတွက်ငွေပေးချေမှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များရရှိလာပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုဖြည့်ပြီးနောက်သင်ရွေးချယ်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
အမိန့်ဖျက်သိမ်းခံရပါကငွေပေးချေမှုပမာဏကို (၇) ရက်အတွင်းသင့်ဘဏ်အကောင့်သို့အပြည့်အဝပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ဘဏ်ကတ်ဖြင့်ငွေပေးချေမှုကိုချက်ချင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်သေပြငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြစ်သော CloudPayments စနစ်နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ငွေပေးချေပြီးသည်နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအောင်မြင်ကြောင်းသတင်းစကားကိုသင်ရလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်တွင်လည်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။
သင်၏အမှာစာကိုဘဏ်ကဒ်ဖြင့်ငွေသားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သော်လည်းကောင်းတိုက်ရိုက်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများသည်ငွေသားမရှိသောငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ပန်းစည်းတစ်ခုစီ၏ဘေးတွင်ပန်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းအတွက်အသုံးပြုမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဒီ site မှာအဆင်ပြေလွယ်ကူတဲ့“ Fast Delivery” filter ရှိပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုပြီး၊ အချိန်တိုအတွင်းပို့ဆောင်နိုင်သောပန်းစည်းများအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
မြို့တော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးမြို့တော်နှင့်စိန့်ပီတာစဘတ်များတွင် - လက်စွပ်လမ်းအတွင်းတွင်ဖြစ်သည်။ ပေးပို့သည့်လိပ်စာသည်မြို့ပြင်တွင်ရှိလျှင်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုအလိုအလျောက်တွက်ချက်သည်။ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးပေါ် မူတည်၍ စနစ်သည်သင့်အားပို့ဆောင်စျေးနှုန်းကိုပေးလိမ့်မည်။ များသောအားဖြင့် ၁ ကီလိုမီတာလျှင် ၄၅ ရူဘယ်ခန့်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
သင်ပို့သည့်လိပ်စာအတိအကျကိုမဖော်ပြနိုင်သော်လည်းပန်းစည်းကိုပို့သောအခါလက်ခံသူသည်မြို့ပြင်တွင်ချက်ချင်းရောက်ရှိနေမည်ဆိုပါက ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကသင့်အားဤပြresolveနာကိုဖြေရှင်းရန်သင့်အားသေချာစွာဖုန်းဆက်ပါလိမ့်မည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်နာရီနာရီပေးပို့ကာလကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အချိန်အတိအကျမပေးနိုင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့က ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး ချင်းစီကိုချဉ်းကပ်ရန်တစ် ဦး ချင်းချဉ်းကပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်မှာကြားခြင်းအတွက်သင်ဆန္ဒကိုဖော်ပြနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများက၎င်းတို့အားအကောင်အထည်ဖော်ရန်တတ်နိုင်သမျှပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။
မှာယူပြီးနောက်သင်မှာကြားမှုအခြေအနေကိုစစ်ဆေးရန်ထူးခြားသောလင့်ခ်တစ်ခုပါသောမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ပန်းအလှပြင်သူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ အချောပန်းစည်း၏ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးမြေပုံပေါ်တွင်သင့်မှာကြားမှုတည်နေရာကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ ပို့ကုန်အပြီးတွင်သင်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့်ပန်းအလှပြင်သူထံပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ရေးနိုင်သည်။ ဖောက်သည်များကတုံ့ပြန်ချက်ပေးသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ပန်းများပို့ခြင်းမှာယူခြင်းအကြောင်းကိုသင်၏အထွေထွေအထင်အမြင်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်လည်အသိပေးစာတစ်ခုပို့နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှု၏အကူအညီဖြင့်သင်တစ်နိုင်ငံလုံးကိုသာမကကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ပန်းများကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ သင်စိတ် ၀ င်စားသောမြို့တော်ကိုရှာဖွေရန်သာရိုက်ထည့်ပါ။ ပန်းစည်းအတွက်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာအားလုံးကိုပြလိမ့်မည်။
ပန်းစည်းတစ်ခုစီ၏အနီးတွင်ပန်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်လိပ်စာသို့လိပ်စာပေးပို့ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောအချိန်ရှိသည်။ မှာယူသောအခါ၊ ၎င်းကိုအာရုံစိုက်ရန်သေချာပါစေ။ သင်ပန်းများကိုအရေးတကြီးပို့ရန်လိုပါက Fast Delivery filter ကိုအသုံးပြုပါ။ သင်တစ် ဦး သတ်သတ်မှတ်မှတ်နေ့စွဲအပေါ်ပေးပို့လိုလျှင်, အမိန့်အားမရသောအခါကရွေးပါ။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်တွင် "Remind" ဟူသောစကားလုံးဘေးတွင်အမှတ်အသားတစ်ခုထည့်ပါက Floristum.ru ၀ န်ဆောင်မှုကသင့်မှာကြားမှုကိုသတိပေးလိမ့်မည်။ ဤစာသည်သတ်မှတ်ထားသောပေးပို့မည့်နေ့မတိုင်မီသုံးရက်အလိုတွင်သင့်ထံသို့ရောက်ရှိလာမည်။
ပို့မည့်နေရာကိုသာဖော်ပြပါ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပန်းစည်းကိုရွေးချယ်ပြီးမှာယူပါ။ အော်ဒါတွင်ပေးပို့သူနှင့်လက်ခံသူ၏ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်များအပြင်ပေးပို့မည့်အချိန်ကိုဖော်ပြပါ။ အမှာစာကိုအောင်မြင်စွာငွေပေးချေပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းချီဆရာများသည်ယင်းကိုပြုလုပ်ရန်ယူသွားပါမည်။ သင့်အနေဖြင့်စာအားဖြင့်ပေးပို့ခြင်းအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့်လက်ခံရရှိသည့်ပန်းများကိုသင်မကြိုက်ပါကသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်သို့သွားပါသို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျ (သို့) စာဖြင့်သင့်ထံသို့ပေးပို့သော link ကိုလိုက်လုပ်ပါ။ ထိုတွင်သင်သည်သင်၏အမှာစာနှင့်ပတ်သတ်သောတုံ့ပြန်ချက်များကိုထားနိုင်သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်သည်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါကအငြင်းပွားမှုကိုသင်ဖွင့်နိုင်သည်၊ ထို့နောက်ပန်းချီဆရာ၏အကောင့်ရှိငွေပမာဏကိုတရားစွဲဆိုမှုကာလအတွင်းအေးခဲသွားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှု၏မူဝါဒအရ ၀ န်ဆောင်မှုခံသူသည်ပန်းစည်းကိုအစားထိုးရန်သို့မဟုတ်ပမာဏကိုအပြည့်အ ၀ ပြန်ပေးရန်ပန်းရောင်းသူနှင့်သဘောတူနိုင်သည်။ ပန်းအလှပြင်သူများသည်သင့်အားအောက်ပါအမိန့်များကိုလျှော့စျေးပေးသင့်သည်။ အငြင်းပွားမှုကိုပန်းစည်းများပေးပို့ပြီးနောက်သုံးရက်အတွင်းဖွင့်နိုင်သည်။ သငျသညျယခင်ကစတိုးဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်သီးခြားပန်းအလှပြင်ဆိုင်မှအမိန့်များအတွက်ကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ရေးထားခဲ့လျှင်, အငြင်းပွားမှုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင် "စတိုးဆိုင်ကိုကျွန်တော်မသွားနိုင်" ခလုတ်ကိုနှိပ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ပန်းအလှပြင်သူသည်သင်ခေါ်ဆိုရန်ကြိုးစားသည့်အကြောင်းကြားစာကိုရရှိလိမ့်မည်၊ စတိုးဆိုင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအလိုအလျောက်လျှော့ချလိမ့်မည်။ အလှည့်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်စတိုးဆိုင်ကိုဆက်သွယ်ပြီး၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများကသင့်ကိုကျိန်းသေပြန်လည်ခေါ်ယူလိမ့်မည်။
များသောအားဖြင့်လက်ခံသူများသည်အမှန်တကယ်မပေးပို့မီဆက်သွယ်ရသည်။ လိပ်စာသို့လတ်ဆတ်သောပန်းများပို့ပေးရန်အဆင်ပြေမည့်အချိန်ကိုစာပို့သူကသဘောတူလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်သတ်မှတ်ထားသောရက်စွဲတစ်ခုအတွက်အမှာစာကိုတင်ထားလျှင်လက်ခံသူသည်များသောအားဖြင့်နံနက်ယံ၌ပေးပို့သည့်နေ့တွင်ဆက်သွယ်လိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်တွင်သင်သည်သင်၏မှာကြားမှုကုန်ဆုံးချိန်ကိုရှာတွေ့နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်လက်ခံသူအတွက်အဆင်ပြေသည့်အချိန်သို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ကော်ပိုရိတ်အမိန့်များကိုပုံမှန်ပြုလုပ်သည်၊ ၎င်းကိုအလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့်ကူညီသည်။ ပန်းစည်းများစွာကသင့်အားမည်သည့်အခါသမယအတွက်ပန်းစည်းရွေးချယ်နိုင်သည်ကိုခွင့်ပြုထားသည်။ အမှာစာတင်သောအခါတရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်း၏အသေးစိတ်ကိုသင်ဖော်ပြရမည်။ ငွေတောင်းခံလွှာကိုသင်၏စာထဲသို့အလိုအလျောက်ပို့လိမ့်မည်။
ပထမဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုအဖြစ်ထားသောအခါ၊ သင်သည်သဘောတူညီချက်နှင့်ငွေတောင်းခံလွှာပါသောစာကိုအလိုအလျောက်ပေးပို့လိမ့်မည်။ သင်ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်လက်ခံရရှိသည့်သဘောတူညီချက်ကိုမိတ္တူနှစ်စောင်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာသို့ပေးပို့ရမည်။ ပြီးတော့သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကိုမင်းဆီပြန်ပို့ပါ့မယ်။
သငျသညျအမိန့်မချခင်စာချုပ်ကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ: @
၀ ယ်သူသည်ဆိုက်ကိုအလိုအလျောက်မှတ်ပုံတင်သည်။ အမှာစာသတင်းအချက်အလက်တွင်သင်သတ်မှတ်ထားသောလက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်သည်နောင်တွင်သင်၏လော့အင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ကိုထည့်သွင်းရန်ကုဒ်ကိုသင့်အားစာဖြင့်ပေးပို့ပါလိမ့်မည်။
ပန်းတစ်ပွင့်ကိုသင်မှာယူလျှင်အနည်းဆုံး ၇ ခုရွေးရမည်။ သင်၏ "Super Offer" အပိုင်းသို့သွားရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ ၎င်းကိုဆိုက်၏ပင်မစာမျက်နှာတွင်တွေ့နိုင်သည်။ အဆင်သင့်ဈေးနှုန်းသက်သာသည့်လက်ကားနှင့်လက်လီစတိုးဆိုင်များမှကမ်းလှမ်းချက်များကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ သင်ရွေးချယ်ထားသောပန်းစည်းတွင်တစ်ခုခုကိုပြောင်းလဲလိုပါကသင်ကြားလိုသောအရာများကိုကြိုတင်မှာထားပါ။ ဖြစ်နိုင်သည့်အစားထိုးရွေးချယ်မှုများကိုဆွေးနွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းအလှပြင်သူများကသင့်အားခေါ်လိမ့်မည်။
ပန်းစည်းနှင့်အတူဓာတ်ပုံအနီး၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှု၏ပြီးပြည့်စုံသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ သင်တို့သည်လည်းပန်း၏မည်သည့်နာမကိုအမှီနှိပ်နိုင်သည်, သူကပုံထဲမှာအရောင်မီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မည်။
ပန်းစည်းများအတွက်အဆင်သင့်စျေးနှုန်းများနှင့်အတူလက္ကားနှင့်လက်လီစတိုးဆိုင်များမှကမ်းလှမ်းမှုကိုဒီမှာ။ ထို့အပြင်သင်ကိုယ်တိုင်ပန်းများအရေအတွက်၊ အမျိုးအစား၊ ပင်စည်အရှည်နှင့်အရောင်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာကိုသွားခြင်းဖြင့်ပန်းစည်းကို ၃၀% သို့မဟုတ် ၆၀% တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမူရင်းပမာဏ၏ဤအပိုင်းတွင်ပန်းစည်း၏စျေးနှုန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားပြီးပန်းစည်းတွင်ပါ ၀ င်သောပန်းများကိုထပ်ပေါင်းထည့်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပန်းတစ်မျိုး၏ပန်းစည်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါက၎င်းတို့အရေအတွက်ကိုမည်သည့်နံပါတ်ဖြင့်မဆိုတိုးနိုင်သည်။
ပန်းစည်းများအတွက်ရွေးချယ်စရာများအားလုံးသည် site ပေါ်တွင်တင်ပြထားပါသည်။ သင်၏ရှာဖွေမှုအတွက်အဆင်ပြေသောစစ်ထုတ်ကိရိယာများအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပန်းပွင့်များနှင့်အလုပ်လုပ်သောပန်းအလှပြင်သူများနှင့်အဓိကအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
Floristum.ru ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောပန်းအလှပြင်သူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျဉ်းကိုသိကြသည် -“ လတ်ဆတ်သောပန်းများသာ! သဘောမတူလား Floristum.ru ဟာမင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ " ထို့ကြောင့်သင်ဖွဲ့စည်းမှုတွင်လတ်ဆတ်သောပန်းများသာပါဝင်သည်ကိုသင်သေချာစေနိုင်သည်။ ပန်းစည်းများပို့ပြီးသောအခါပန်းပွင့်များ၏လတ်ဆတ်မှုကိုအကဲဖြတ်သည်။ ပြီးနောက်သင်စိတ်ဝင်စားသောပန်းအလှပြင်သူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုရှာယူနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငွေပေးချေမှုကိုသီးခြားစာမျက်နှာတစ်ခုတွင်ပြုလုပ်ပြီးဖောက်သည်၏အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသိများပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစနစ်များဖြင့်သာအလုပ်လုပ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်။ အော်ဒါမှာယူသောအခါသင် ၀ န်ဆောင်မှု၏အကောင့်ထဲသို့ငွေကိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်အပ်နှံပြီးနောက်သုံးရက်အကြာတွင်အမှာစာမပြီးမချင်းသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ဖောက်သည်အမိန့်နှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းများအဘို့အလို့ငှာထိုကဲ့သို့သောအတိုင်းအတာယူသည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းသင်၌အငြင်းပွားမှုတစ်ခုဖွင့်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်၊ ထို့နောက်ပြproblemsနာအားလုံးဖြေရှင်းပြီးသည်အထိငွေသည်ပန်းရောင်းသူ၏အကောင့်သို့သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ အမှာစာသည်အလုပ်အတွက်ယူပြီးပြီဆိုလျှင် ၁ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိစောင့်ရပါလိမ့်မည်။
သင့်မှာကြားမှုကိုစိတ်ပျက်နေပါကပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သေချာစေပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါကပန်းအလှပြင်သူနှင့်အငြင်းပွားမှုကိုသင်ဖွင့်နိုင်သည်။ အခြေအနေအားလုံးကိုရှင်းလင်းသည့်အချိန်၌ပန်းရောင်းသူ၏အကောင့်ရှိငွေကိုပိတ်ဆို့လိမ့်မည်။ ပန်းစည်းကိုအစားထိုးရန်သို့မဟုတ်ငွေအပြည့်အဝပြန်ပေးရန်အတွက်ပန်းအလှပြင်သူနှင့်သင်သဘောတူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းအလှကုန်များသည်သူတို့၏ဖောက်သည်များကိုတန်ဖိုးထားသောကြောင့်၎င်းတို့သည်နောက်ဆက်တွဲအမှာစာများအတွက်အထူးလျှော့စျေးများပေးလေ့ရှိသည်။ အငြင်းပွားမှုကိုပန်းစည်းများပေးပို့သည့်နေ့မှသုံးရက်အတွင်းစတင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်မှာကြားမှုကိုကောင်းစွာပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပါကအငြင်းပွားမှုကိုဖွင့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ပန်းများပွင့်ပြီးနောက်သင်ဖုန်းနံပါတ်သို့စာတိုတစ်စောင်ပို့ပါလိမ့်မည်။ တုန့်ပြန်မှုအနေနှင့်သင်သည်ပန်းရောင်းသူနှင့်အမှာစာနှင့်အလုပ်လုပ်ပုံကိုရေးသားနိုင်သည်။ ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တစ်ခုရေးသားနိုင်သည်။
စတိုးတစ်ခုစီတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများစွာရှိပြီး၎င်းတို့တွင်အပြုသဘောနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာနှစ်မျိုးလုံးရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီ၏ဘေးတွင်ဖော်ပြချက်ကိုဖောက်သည်သို့မဟုတ်ဝယ်သူကမည်သူရေးသားသည်ကိုဖော်ပြထားသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုအစောပိုင်းကရေးသားခဲ့သူမှသာတည်းဖြတ်နိုင်သည်။
ပန်းစည်းတစ်ခုစီအတွက်အခမဲ့ပို့စကတ်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဝယ်သူကသာဂုဏ်ပြုလွှာကိုရေးရမည်။ ပန်းအလှပြင်သူသည်သင်၏ပန်းစည်းနှင့်စာသားနှင့်လိုက်ဖက်သောကဒ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။
မှာယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်သောအခါသင့်အားထပ်ဆောင်းထုတ်ကုန်များစွာပေးလိမ့်မည်။ သင်ဒီမှာလိုအပ်သည့်အရာကိုမတွေ့ပါက ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ သူတို့သည်သင်၏အကူအညီကိုဆက်ခံလိမ့်မည်။
ပန်းအလှပြင်သူသည်သင်ရေးသားထားသောစာပေါ် မူတည်၍ နှုတ်ခွန်းဆက်ကဒ်ကိုရွေးချယ်သည်။ အကယ်၍ သင့်မှာသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆန္ဒများရှိရင်၊ အမှာစာမှာထားသည့်အခါသူတို့ကထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များကိုသူတို့ကိုအသိပေးပါ။
အော်ဒါမှာယူသောအခါ“ ပန်းစည်းနှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ” ဟူသောစကားလုံးများရှေ့တွင်အမှတ်အသားတစ်ခုထည့်ပါ။ အကယ်၍ လိပ်စာကသဘောတူပါကသင်၏ရုပ်ပုံကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့် (သို့) အီးမေးလ်ဖြင့်တွေ့လိမ့်မည်။
"Floristum.ru flowers" မိုဘိုင်း application ကိုမကြာမီ AppStore သို့မဟုတ် PlayMarket တွင်ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်မတူညီသောမြို့ကြီးများမှပန်းအလှကုန်များကိုခန့်အပ်သည်။ အမှာစာကိုချသောအခါပန်းရောင်းသူသည်သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်၊ သူသည်သင်ရွေးချယ်သောမြို့တွင်ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုကိုထုတ်ဝေသည်။ မြို့တစ်မြို့ချင်းစီတွင်ပန်းချီဆရာများမတူညီကြသဖြင့်အမျိုးစုံကွဲပြားကြသည်။